SOFTWARE MAKA ỊME EGWUREGWU 2D / 3D. KEDU ESI MEPỤTA EGWUREGWU DỊ MFE (IHE ATỤ)? - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Egwuregwu ... Ndị a bụ otu n'ime mmemme kachasị ewu ewu nke ọtụtụ ndị na-azụ kọmputa na kọmpụta. Eleghị anya, PC agaghị adịwanye mma ma ọ bụrụ na ha enweghị egwuregwu.
Ma ọ bụrụ na mbụ ka ịmepụta egwuregwu ọ bụla, ọ dị mkpa ka ị nweta ihe ọmụma pụrụ iche na usoro mmemme, ịbịaru ụdị, wdg. - ugbu a, ọ bụ ihe zuru oke iji nyochaa nchịkọta akụkọ ụfọdụ. Ọtụtụ ndị editọ, n'ụzọ, dị nnọọ mfe ma ọbụna onye na-enweghị ike ịghọta ha.
N'isiokwu a, m ga-achọ imetụ ndị editọ edere dị otú a, yana iji ihe atụ nke otu onye n'ime ha wepụta site na ịmepụta ihe egwuregwu dị mfe site na nzọụkwụ.
1. Mmemme maka ịme egwuregwu 2D
2. Mmemme maka ịme egwuregwu 3D
3. Esi mepụta egwuregwu 2D na nchịkọta Game Maker - nzọụkwụ site nzọụkwụ
N'okpuru 2D - ghọta egwuregwu abụọ. Dịka ọmụmaatụ: tetris, cat angler, pinball, egwuregwu dị iche iche kaadị, wdg.
Ihe nlele-2D egwuregwu. Egwuregwu Kọmputa: Solitaire
1) Onye mepụtara egwuregwu
Onye Mmepụta saịtị: //yoyogames.com/studio
Usoro nke ịmepụta egwuregwu na Onye na-eme egwuregwu ...
Nke a bụ otu n'ime ndị editọ kachasị mfe ịmepụta obere egwuregwu. Edere nchịkọta akụkọ ahụ n'ụzọ dị mma: ọ dị mfe ịmalite ịrụ ọrụ n'ime ya (ihe niile dị na ya), n'otu oge ahụ, enwere ohere maka idezi ihe, ụlọ, wdg.
Na-emekarị na nchịkọta akụkọ a na-egwu egwuregwu na ikpo okwu (anya n'akụkụ). Maka ndị ọkachamara nwere ahụmahụ (ndị na-amaghị ntakịrị na mmemme) enwere ọrụ pụrụ iche maka ịtinye ederede na koodu.
Ekwesiri ighota otutu nsogbu na omume di iche iche nke enwere ike idozi ihe di iche iche (odide di n'iru) na nchoputa a: onu ogugu bu nani - karia ihe ole na ole!
2) Mee 2
Onye na-eme ihe nkiri nke oge a (n'echiche kachasị nke okwu), na-ekwe ka ndị ọrụ kọmputa novice mee egwuregwu nke oge a. Ọzọkwa, Achọrọ m imesi ya ike na site n'usoro ihe omume a, enwere ike ịme egwuregwu maka iche iche dị iche iche: IOS, Android, Linux, Windows 7/8, Desktọpụ Mac, Web (HTML 5), wdg.
Onye na-ewu ihe a yiri Onye na-eme egwuregwu - ebe a ịkwesịrị ịgbakwunye ihe, dee ha omume (iwu) ma mepụta ihe dị iche iche. Onye nchịkọta akụkọ dabeere n'ụkpụrụ WYSIWYG - ya bụ. Ị ga-ahụ ozugbo ahụ n'ihi na ị mepụtara egwuregwu ahụ.
A na-akwụ ụgwọ ihe omume ahụ, ọ bụ ezie na ndị na-ebido ụzọ ga-enwe ọtụtụ nnwere onwe free. A kọwara ọdịiche dị n'etiti nsụgharị dị iche iche na saịtị onye mmepụta.
(3D - egwuregwu atọ)
Otu n'ime ndị na-arụ ọrụ kachasị ọnụ ala na 3D (maka ọtụtụ ndị ọrụ, n'ụzọ, mbipute free, nke nwere nkwụsị mmelite nke ọnwa 3), ga-ezu.
3D RAD bụ onye nrụpụta kachasị mfe ka ọ bụrụ onye nwe ụlọ; ọ dịghị ihe mmemme dị mkpa ebe a, ya na ikekwe ịkọwa ihe nhazi maka ihe dị iche iche.
Egwuregwu egwu kachasị ewu ewu nke a na - eji ígwè ọrụ a eme ihe. Site n'ụzọ, ihe nzebichi n'elu kwadoro ya ọzọ.
2) Ịdị n'otu 3D
Onye Mmepụta saịtị: //unity3d.com/
Ngwá ọrụ siri ike na nke zuru ezu maka ịme egwuregwu dị egwu (M rịọ mgbaghara maka nkwado ahụ). M ga-atụ aro ịkwaga ya mgbe m gụsịrị ndị ọzọ na ndị na-emepụta ihe, ya bụ. na aka zuru oke.
Unity 3D ngwugwu gụnyere engine nke na-enye gị ohere iji ike nke DirectX na OpenGL. Na nchikota nke ihe omume ahụ ohere iji rụọ ọrụ na 3D ụdị, na-arụ ọrụ na shaders, onyinyo, egwu na ụda, nnukwu ọbá akwụkwọ nke ederede maka ihe omume.
Ikekwe naanị nzaghachi nke ngwugwu a bụ mkpa maka ihe ọmụma nke mmemme na C # ma ọ bụ Java - akụkụ nke koodu n'oge agwakọta ga-agbakwunye na "usoro ntuziaka".
Onye Mmepụta saịtị: http://www.neoaxis.com/
Ọnọdụ mmepe na-emepe emepe maka ihe ọ bụla egwuregwu na 3D! Na nke a mgbagwoju anya, i nwere ike ime agbụrụ, shooters, na arcades na njem ...
Maka Game Engine SDK, netwọk nwere ọtụtụ mgbakwunye na nkwụnyepu maka ọtụtụ ọrụ: dịka ọmụmaatụ, physics nke ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọelu. Site n'enyemaka nke ụlọ akwụkwọ a na-apụghị ịkọwapụta, ị chọghịdị ịma ihe ọmụma nke asụsụ mmemme!
Ekele maka ọkpọ ọkpụkpọ ọkpụkpụ a na - arụ n'ime injin ahụ, a na - egwu egwuregwu ndị a na - ewu na ọtụtụ nchọgharị ndị a ma ama: Google Chrome, FireFox, Internet Explorer, Opera na Safari.
A na-ekesa Engine Engine SDK dị ka free engine nke na-abụghị azụmahịa mmepe.
Onye na-eme egwuregwu - Onye nchịkọta akụkọ na-ewu ewu maka ịmepụta egwuregwu 2D na-adịghị mgbagwoju anya (ọ bụ ezie na ndị mmepe na-ekwu na ị nwere ike ịmepụta egwuregwu nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbagwoju anya na ya).
Na obere ihe nlereanya a, m ga-achọ igosi nkwụsịtụ ntụziaka site n'ịmepụta egwuregwu. Egwuregwu ahụ dị mfe: ọdịdị Sonic ga-agagharị na ihuenyo na - anwa ichikota apụl green ...
Malite site na omume dị mfe, na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ dịka ụzọ, onye maara, ma eleghị anya, egwuregwu gị ga-abụ ezigbo ihe egwu na oge! Ihe mgbaru ọsọ m n'isiokwu a bụ naanị igosi ebe ị ga-amalite, n'ihi na mmalite bụ ihe siri ike maka ọtụtụ ...
Blanks ịmepụta egwuregwu
Tupu ịmalite ịmepụta egwuregwu ọ bụla, ịkwesịrị ime ihe ndị a:
1. Chọpụta njirimara nke egwuregwu ya, ihe ọ ga-eme, ebe ọ ga-abụ, otu onye ọkpụkpọ ga-esi jikwa ya na nkọwa ndị ọzọ.
2. Mepụta foto nke agwa gị, ihe ndị ọ ga - emekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere bear iji chọta apụl, mgbe ahụ, ịchọrọ ma ọ dịkarịa ala foto abụọ: anụ ọhịa bea na apụl. Ị nwekwara ike ịchọ ndabere: nnukwu foto nke ihe ga-eme.
3. Mepụta ma ọ bụ detuo ụda maka ọdịda gị, egwu a ga-egwu na egwuregwu ahụ.
N'ozuzu, ịkwesịrị: ịnakọta ihe niile ga-adị mkpa iji mepụta. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume mgbe nke ahụ gasịrị ịgbakwunye ọrụ nke ihe egwuregwu ahụ dị ugbu a ihe ọ bụla e chefuru echefu ma ọ bụ hapụ maka oge ọzọ ...
Nzọụkwụ nke obere ihe egwuregwu
1) Ihe mbụ ị ga - eme bụ itinye sprites nke ihe odide anyị. Iji mee nke a, na nchịkwa akara nke usoro ihe omume a nwere bọtịnụ pụrụ iche n'ụdị ihu . Pịa ya iji tinye sprite.
Button iji mepụta sprite.
2) Na windo nke gosipụtara, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ ibudata maka sprite, wee dee nha ya (ọ bụrụ na achọrọ).
3) Ya mere, ịkwesịrị itinye ndị nledo gị niile na ọrụ ahụ. N'ọnọdụ m, ọ gbanwere 5 sprites: Sonic na multi-acha apụl: green circle, red, orange and gray.
Ndị na-ede ede na ọrụ.
4) Ọzọ, ịkwesịrị ịgbakwunye ihe na oru. Ihe bụ ihe dị mkpa na egwuregwu ọ bụla. Na Onye mepụtara Game, ihe bụ ihe egwuregwu: dịka ọmụmaatụ, Sonic, nke ga-aga n'ihu na ihuenyo dabere na igodo ndị ị ga-agbanye.
N'ozuzu, ihe ndị a bụ isiokwu dị mgbagwoju anya ma ọ gaghị ekwe omume ịkọwa ya na tiori. Ka ị na-arụ ọrụ na nchịkọta akụkọ ahụ, ị ​​ga-amawanye ihe nnukwu njirimara nke Onye Game Maker nyere gị.
Ka ọ dị ugbu a, mepụta ihe mbụ - pịa bọtịnụ "Tinye ihe" .
Onye na-eme egwuregwu. Na-agbakwụnye ihe.
5) Ọzọ, a họọrọ sprite maka ihe agbakwunyere (lee nseta ihuenyo n'okpuru, n'aka ekpe + n'elu). N'okwu m - agwa Sonic.
Mgbe ahụ, ederede maka ihe a: enwere ike ịnwe ọtụtụ n'ime ha, ihe omume ọ bụla bụ omume nke ihe gị, mmegharị ya, ụda ya na ya, njikwa, iko, na àgwà egwuregwu ndị ọzọ.
Iji tinye ihe omume, pịa bọtịnụ ahụ n'otu aha - wee họrọ ihe maka ihe omume ahụ na kọlụm aka nri. Dịka ọmụmaatụ, na-agagharị na ihuenyo mgbe ịpị igodo akụ.
Na-agbakwunye ihe omume na ihe.
Onye na-eme egwuregwu. Maka ihe Sonic, enwere ihe ise ise: ịmegharị àgwà ahụ na ntụziaka dị iche iche mgbe ịpị igodo igodo; agbakwunye ọnọdụ a mgbe ị na-agafe ókè nke mpaghara egwu ahụ.
Site n'ụzọ, enwere ike inwe ọtụtụ ihe: Onye na-eme egwuregwu enweghị obere ihe ebe a;
- ọrụ nke na-ebugharị àgwà: ọsọ nke ijegharị, jumps, ike nke jump, wdg;
- arụ ọrụ nke egwu na omume dị iche iche;
- ọdịdị na mwepu nke agwa (ihe), wdg.
Ọ dị mkpa! Maka ihe ọ bụla n'ime egwuregwu ị chọrọ ịdebanye aha gị. Ihe ndị ọzọ maka ihe ọ bụla ị denyere aha - ya ka ọ dịkwuo elu ma nwee nnukwu ike ime egwuregwu ahụ. Na ụkpụrụ, ọbụna na-amaghị ihe kpọmkwem nke a ma ọ bụ ihe omume ahụ ga-eme, ị nwere ike ịzụ site n'ịgbakwunye ha ma hụ otú egwuregwu ahụ ga-esi eme mgbe ahụ. N'ozuzu, nnukwu oghere maka ịnwale!
6) Ihe ikpeazụ na otu n'ime ihe ndị dị mkpa bụ imepụta ụlọ ahụ. Ime ụlọ bụ ụdị ọhụụ nke egwuregwu ahụ, ọkwa nke ihe gị ga-emekọrịta. Iji mepụta ụlọ dị otú a, pịa bọtịnụ ahụ na akara ngosi na-esonụ :.
Tinye ụlọ (oge egwuregwu).
N'ime ụlọ ahụ e kere eke, na-eji òké, ị nwere ike ịhazi ihe anyị na-ahụ. Dezie aha egwuregwu, debe aha windo egwuregwu ahụ, dee ihe ngosi, wdg. N'ozuzu, ebe nkuzi zuru ezu maka ịnwale na ịrụ ọrụ na egwuregwu ahụ.
7) Iji malite egwuregwu a - pịa bọtịnụ F5 ma ọ bụ n'ime menu: Run / normal launch.
Gbaa egwuregwu ahụ bara uru.
Onye na-eme egwuregwu ga-emeghe windo n'ihu gị. N'ezie, ị nwere ike lee ihe ị nwetara, nnwale, egwu. N'okwu m, Sonic nwere ike ịkwaga dabere na igodo isi na keyboard. A ụdị obere-egwuregwu (oh, na e nwere oge mgbe ntụ ọcha ahụ na-agba ọsọ na ihuenyo nwaa kpatara mberede na mmasị n'etiti ndị mmadụ ... ).
Ihe egwuregwu ...
Ee, n'ezie, egwuregwu a na - eme bụ oge ochie ma dị mfe, ma ihe atụ nke okike ya bụ ihe ngosi. Ọzọkwa, ịnwale ma na-arụ ọrụ na ihe, sprites, ụda, ndabere na ụlọ - ị nwere ike ịmepụta ezigbo egwuregwu 2D. Iji mepụta egwuregwu dị otú ahụ 10-15 afọ gara aga, ọ dị mkpa ịnweta ihe ọmụma pụrụ iche, ugbu a ọ bụ iji nwee ike ịgbanwegharị òké ahụ. Ọganihu!
Na nke kacha mma! Egwuregwu egwuregwu niile nke ọma ...